Ukuphupha uboya Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Kwixesha elidlulileyo, uboya babusetyenziselwa ukukhusela kubanda, iqabaka kunye nokufuma. Namhlanje kukwakho neebhatyi ezenziwe ngemisonto eyenziweyo, ekhusela izinto. Uboya, kwelinye icala, buye baba luphawu lwexabiso, njenge mink. Kwangelo xesha linye, nangona kunjalo, bakwaphantsi kokugxekwa, njengoko izilwanyana zihlala zithuthunjiswa njengabaxhasi boboya kwaye ziphathwa ngendlela engenasidima. Ngamanye amaxesha basengozini yokuphela kwaye basabulawa nje ukuze bathengise uboya babo ngexabiso eliphezulu.
Ukuphathwa ngokukhohlakeleyo kwezilwanyana kudlala indima yesibini xa siphupha ngoboya. Ukuba sinxiba enye kumaphupha ethu, ihlala ibonisa impumelelo, kodwa ikwakhusela. Yintoni kanye enokuthethwa lulusu njengophawu lwephupha?
1 Uphawu lwephupha «ulusu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ulusu» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ulusu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ulusu» - ukutolikwa ngokubanzi
Ephupheni, ukunxiba uboya okanye ukuntywila kwenye kunokuba sisiseko Izifo bhekisa. Kukho umngcipheko wokubanda, umkhuhlane, okanye umqala obuhlungu. Ngamanye amaxesha isimboli iyavela kwakhona kule meko xa kubanda kakhulu kwigumbi lokulala, Oko kukuthi, kwimeko yokwenyani.
Ngapha koko, ukunxiba uboya ephupheni nako kungazisa ithamsanqa, ubutyebi kunye phu melela Bonisa. Umntu ochaphazelekayo akufuneki azikhathaze ngemicimbi yezemali. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba ukonwaba kwakho kuhlala kuxhomekeke ekubeni kunzima kangakanani. Umsebenzi wabanyeMolo kusasa ngendleko zakho.
Ngokufanayo, ukuba ulele eluswini ephupheni, ngekhe ufune ukuba nzima kakhulu kwinyani. Kuphela ngabo bathengisa uboya emaphupheni abo babonelela ngokusebenza kwabo kubomi bemihla ngemihla kwaye ngenxa yoko bazuze ubomi obutofotofo.
Ukuba uphupha ubona uboya obuxhomekekileyo, lo mfanekiso uphuphayo ukwathembisa ubutyebi, imbeko kunye nentuthuzelo. Le yokugqibela ke ibhekisa ikakhulu kwi ikameruapho iqela elinomdla liza kuziva likhuselekile.
Ukuba iphupha elo linikwe ulusu, ngokunokwenzeka uya kutshata ngemali encinci. Nangona kunjalo, kuyathandabuza ukuba iimvakalelo ziyabandakanyeka na kulo mtshato okanye unika nje izibonelelo zezinto eziphathekayo. I-muff muff ingasetyenziswa njengomfanekiso wephupha ngokwesicelo somphuphi. ukhuseleko Iingoma.
Uphawu lwephupha «ulusu» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokombono wengqondo, ukubona uboya ephupheni kunokwanelisa isidingo saloo mntu kuthethwa ngaye. ukhuseleko y khu seleko Ngokukhawuleza. Ingakumbi ukuba ibuboya obuxabiseke kakhulu, inokuziva ingonwabanga kwindawo okuyo ngoku. Ukuphupha akwabelani nezicwangciso kunye nezenzo zabanye.
Ukongeza, kutoliko lwengqondo ngephupha, imvelaphi yoboya nayo inokubaluleka, oko kukuthi, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba uboya buvela kwesiphi isilwanyana. i iipropati isilwanyana esinxibe ngaso sinako ukwenza iinxalenye ezithile ubuntu yamaphupha adlulisiweyo.
Ngaba unabo ubuqhophololo bempungutye? ¿Amandla nesantya sengwenkala? Okanye ukusikwa komvundla? Okanye mhlawumbi ufuna ezi mpawu.
Uphawu lwephupha «ulusu» - ukutolika kokomoya
Kwiphupha lokomoya, uphawu "lolusu" likuvumela ukuba wenze izigqibo malunga nonxibelelwano lwangaphakathi lwe iRazón y ithuku ukuya. Njengento yokunethezeka, ikwakhuthaza abantu ukuba basebenzise ngokupheleleyo imithombo yokomoya kwaye ngaloo ndlela baqhubele phambili ukukhula komntu.